VCI akwụkwọ maka ferrous metal - China Ma Anshan Steel Packaging
VCI Anti-corrosion Akwụkwọ -Eco-enyi na enyi, echekwa na otutu mgbochi corrosion nkwakọ ihe VCI akwụkwọ maka ferrous metal- E nwere ihe abụọ dị iche iche nke Ọdịdị: VCI akwụkwọ Pee mkpuchi (PA) na-enweghị Pee (PO). Ngwaahịa a na-mepụtara karịsịa maka carbon nchara na nkedo ígwè. PO ngwaahịa nwere ike itighachi 100% na-eji nke nkewa n'etiti n'ígwé nke metal akụkụ. PA ngwaahịa nwere ike na-enye waterproof na greaseproof ọrụ, n'ihi ya, ọ na-etinyere elu nkwakọ ngwaahịa ihe onwunwe ka mma. Anyị nwere ike p ...
VCI Anti-corrosion Akwụkwọ
VCI akwụkwọ maka ferrous metal- E nwere ihe abụọ dị iche iche nke Ọdịdị: VCI akwụkwọ Pee mkpuchi (PA) na-enweghị Pee (PO). Ngwaahịa a na-mepụtara karịsịa maka carbon nchara na nkedo ígwè. PO ngwaahịa nwere ike itighachi 100% na-eji nke nkewa n'etiti n'ígwé nke metal akụkụ. PA ngwaahịa nwere ike na-enye waterproof na greaseproof ọrụ, n'ihi ya, ọ na-etinyere elu nkwakọ ngwaahịa ihe onwunwe ka mma. Anyị nwere ike ibipụta logo na VCI akwụkwọ.
◆ Ogologo oge nchedo nke ígwè na ígwè na ngwaahịa.
◆ Nzute ntụziaka na ụkpụrụ nke JIS Z 1535, QB1319-2010, TRGS 615, RoHS, wdg
Dị iche iche igwe (50 - 280g / m2)
Previous: VCI akwụkwọ maka ọla kọpa
Osote: VCI akwụkwọ maka Multi-metal
Olee Otú Vci Akwụkwọ Ọrụ
Olee Vci Akwụkwọ Works
Steel Wrapping Akwụkwọ
Vci Akwụkwọ Definition
VCI Akwụkwọ Exporters
Vci Akwụkwọ didie ke enye ọrụ
Vci Akwụkwọ Manufacturers
Vci Akwụkwọ Msds
Vci Akwụkwọ Per nnù Spec
Vci Akwụkwọ apụta
Vci Akwụkwọ Wiki
VCI nchara na-àmà KRAFT akwụkwọ
Gịnị Bụ Vci Akwụkwọ
crepe akwụkwọ laminated VCI film